Facebook မှာ ဘက်ဂရောင်း ပြောင်းနည်းလေးပါ facebook background changer ~ ITmanHOME
22:29 facebook, နည်းပညာ No comments
Facebook မှာ ဘက်ဂရောင်း ပြောင်းနည်းလေးပါ facebook background changer
ပထမဦးဆုံး http://www.get-styles.com ကို သွားလိုက်ပါ….
plug-ins တွေ အများကြီးပေးထားတယ်ဗျ…ဘယ်ဟာကို ဒေါင်းလော့ဆွဲဆွဲ သုံးလို့ရတယ်ဗျ….
Mozilla ရော IE အတွက်ပါပေးထားတယ်….
အဲမှာ select ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး plug-ins လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ….
ဒေါင်းပြီးသွားရင် Run လိုက်ပါ….
Click 'Yes' to confirm the installaion
Run လိုက်ရင် သူက မော်ဇီလာကို ခဏပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်…Effect ဖြစ်အောင်လို့ပါ…
ပြီးရင် မော်ဇီလာကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပေါ့…ပြီး၇င် သူ့ဆိုဒ်http://www.get-styles.com ကို ပြန်သွားပြီးတော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ plug-ins ကို select လုပ်ပေးရမှာပါ….
ဒါဆို ရင် ရသွားပါပြီ…..
ကြောငြာဝင်လိုက်ဦးမယ်။ကျွန်တော့ ITmanHOME Site လေးကိုလဲ တခြားသူငယ်ချင်းတွေဆီ မျှဝေပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ။